Malaoỳ - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Malawi)
Republic of Malawi ((en))
Dziko la Malaŵi rw
Repoblikan'i Malaoy ((mg))
Teny filamatra : Unity and Freedom
(Firaisana sy Fahalalahana)
Teny ofisialy Fiteny anglisy, fiteny chichewa
13° 57′ S, 33° 42′ E
Tanàna ngeza indrindra Blantyre
- Président Repoblika
- Rano (%) faha 99
118 844 km²
- hakitroka faha 67
13 931 831 mpo.
Anaran'ny mponina Malawita
Sandam-bola Kwacha malawita (MWK)
Hiram-pirenena Mlungu salitsani malawi
Ny Malaoỳ dia firenena any amin' ny faritra atsimo ao Afrika na Afrika Atsinanana, tsy manana morontsiraka, manana velaran-tany mirefy 118 484 km², eo anelanelan' i Môzambika, i Zambia, ary i Tanzania. Voafaritry ny farihy Malawi na farihy Nyassa izy, farihy fahatelon' i Afrika amin' ny velarany, mandrakotra ampadimin' ny velarantan' i Malaoỳ ny farihy Malawi ary betsaka ny renirano manary ao.
Ny fiavian' ny anarana hoe Malaoỳ (avy amin' ny anaran' ny farihy, amin' ny fiteny banto) dia tsy mazava tsara; lazaina fa avy amin' ny mponina any atsimon' i Malaoỳ na lazaina fa maneho ny hazavan' ny masoandro rehefa miposaka eo amin' ny farihy (eo amin' ny sainam-pirena).
Firenena be tendrombohitra i Malaoỳ. Ny ampahany be atsinanana amin’ ny taniny dia misy ny farihy Malawi, izay farihy lehibe fahatelo aty Afrika.
I Malaoỳ dia iray amin’ ireo firenena manana mponina be hakitroka indrindra aty Afrika, ary ny ankamaroan’ ny mponina dia monina any ambanivohitra. Kristiana ny ankamaroan’ ny vahoala malaoita.
Ny fambolena no iankinan’ ny toekaren’ i Malaoỳ, nefa ianjadian’ ny fiovaovan’ ny toetrandro, indrindra ny haintany izany fambolena izany.
Tamin’ ny taona 1964 no nahazoan’ i Malaoỳ ny fahaleovan-tenany raha nozanahin’ ny Britanika izy talohan’ izany. Mpikambana ao amin’ ny Commonwealth i Malaoỳ ary ny fiteny anglisy sy ny fiteny tsitseoa no fiteny ôfisialiny.
Firenena ao Afrika: Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla - Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana - Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia - Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy - Jibotỳ - Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara - Lezôtô - Liberia - Libia - Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika - Namibia - Nizera - Nizeria - Oganda - Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Repoblikan'i Afrika Afovoany - Repoblikan'i Kôngô - Roanda - Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy - Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady - Zambia - Zimbaboe
Foko ao Malaoy: Lemba (vahoaka) -
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Malaoỳ&oldid=1037376"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 13:48
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 13:48 ity pejy ity.